China Thailand- TISI Sevhisi uye Kuyedza | MCM
Chii chinonzi TISI Certification?
TISI ipfupi kune Thai Industrial Standards Institute, inobatana neThailand Viwanda department. TISI inoona nezve kuumba zviyero zvemumba pamwe nekutora chikamu mukuumbwa kwemitemo yenyika dzepasi rose uye kuongorora zvigadzirwa uye nzira yekuongorora inokwanisa kuona kutevedza kwakaringana uye kuzivikanwa. TISI isangano rinotenderwa nehurumende rinotemerwa zvekumanikidza kuThailand. Izvo zvakare zvine basa rekuumba uye manejimendi ematanho, kubvumidzwa kwevashandi, kudzidziswa kwevashandi uye kunyoreswa kwechigadzirwa. Izvo zvinoonekwa kuti hapana asiri ehurumende anomanikidzwa chitupa chemuviri muThailand.
Kune yekuzvidira uye yekumanikidza certification muThailand. TISI marogo (ona Mifananidzo 1 ne2) inobvumidzwa kushandisa kana zvigadzirwa zvichizadzisa zviyero. Kune zvigadzirwa zvisati zvayerwa, TISI inoshandisa zvakare kunyoreswa kwechigadzirwa senzira yechinguvana yesitifiketi.
OmpCompulsory Certification Makuriro
Chitupa chinomanikidzwa chinofukidza zvikamu gumi neshanu, gumi minda, zvinosanganisira: midziyo yemagetsi, zvishongedzo, zvekurapa, zvekuvakisa, zvinhu zvevatengi, mota, pombi dzePVC, midziyo yegasi yeLPG uye zvigadzirwa zvekurima. Zvigadzirwa zvinopfuura chiyero izvi zvinowira mukati mekuzvidira chitupa chiyero. Bhatiri inomanikidzwa chitupa chigadzirwa muTISI certification.
Zvakashandiswa mureza: TIS 2217-2548 (2005)
Zvakashandiswa mabhatiri:Sekondari masero uye mabhatiri (ane alkaline kana mamwe asiri-acid maelectrolyte - zvinoda kuchengetedzwa kwemamaseru echipiri akavharika, uye mabhatiri akagadzirwa kubva kwavari, kuti ashandiswe mumashandisirwo anotakurika)
Rezinesi kuburitsa masimba. Thai Industrial Standards Institute
● MCM inoshanda pamwe nemasangano ekuongorora fekitori, rabhoritari uye TISI zvakananga, inokwanisa kupa yakanakisa chitupa mhinduro kune vatengi.
● MCM ine makore gumi ruzivo rwakakura muindastiri indasitiri, inokwanisa kupa nyanzvi yehunyanzvi rutsigiro
● MCM inopa imwechete-yekumisa bundle sevhisi kubatsira vatengi kupinda mumisika yakawanda (kwete chete Thailand inosanganisirwa) kubudirira neyakareruka maitiro
Pashure: Bhuraziri- ANATEL
Zvadaro: Japan- PSE
Chitupa cheThailand Thailand
Tisi Certification Mutengo
Tisi Certification Maitiro
Tisi Chitupa Sevhisi
Tisi Nguva Yekutungamira
Tisi technical Zvinyorwa
Tisi Bvunzo Zvinhu
Tisi Bvunzo Nzira
Tisi Kuedza Mutengo
Tisi Kuyedza Service
Tisi Nguva Yekuyedza